Wararka Suuqa Kala Iibsiga: Juventus Oo Soo Bandhigtay Qorshe Ay Ku Heleyso Paul Pogba, Iyo Qodobo Kale Oo Muhiim Ah
HomeSuuqa kala iibsigaWararka Suuqa kala iibsiga: Juventus oo soo bandhigtay Qorshe ay ku heleyso Paul Pogba, iyo Qodobo kale oo muhiim ah
March 29, 2021 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Wargeysyada 0
Xiddiga qadka dhexe ee Real Madrid ee reer Norway Martin Odegaard, oo 22 jir ah, kaasoo haatan amaah kula jooga Arsenal ayaa u soo muuqday bartilmaameedka kooxaha Chelsea iyo Liverpool . (AS)
Arsenal ayaa dooneysa inay ceshato Odegaard laakiin waxaa heysta labo walaac oo ku saabsan rajada heshiis joogta ah. (Express)
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Jarmalka Thomas Muller, oo 31 jir ah, oo bartilmaameed u ahaa Manchester United waqtiyadii lasoo dhaafay, ayaa sheegay inuusan wax dhib ah ku qabin inuu ka tago Bayern Munich . (Times)
Xiddiga khadka dhexe ee reer Wales Aaron Ramsey oo 30 jir ah, daafaca reer Brazil Alex Sandro oo 30 jir ah iyo weeraryahanka reer Argentine ee Paulo Dybala oo 27 jir ah ayaa dhamaantood lala xiriirinayaa in ay ka tagayaan kooxda xagaagan. (Dialymail)
Juve ayaa diyaar u ah inay adeegsato Dybala, oo qandaraaskiisu dhacayo Juun 2022, iyadoo qayb ka ah heshiis is dhaafsiga dhowr bartilmaameed, oo ay ku jiraan ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United iyo Faransiiska Paul Pogba, 28 jir. (Football Italia)
Weeraryahankii hore ee Tottenham Jermain Defoe ayaa aaminsan in weeraryahanka reer England Harry Kane, 27, inuu ka tago Spurs hadii uu doonayo inuu koobab ku guuleysto. (Talksport)
Barcelona ayaa dooneysa inay qandaraaska u kordhiso 23 jirka weerarka ka ciyaara ee reer France Ousmane Dembele oo ka badan qandaraaskiisa haatan, kaasoo dhacaya ilaa 2022. (Mundo Deportivo)
Manchester United ayaa weyday saxiixa Dembele xagaagii lasoo dhaafay laakiin weli waxay xiiseyneysaa ciyaaryahanka waxaana ay la xiriirtay kooxda kooxda uu ka tirsan yahay. (Sport.es)
Goolhayaha reer France Hugo Lloris oo 34 jir ah ayay u badantahay in uuna ka tagi doonin kooxda Tottenham xagaagan inkasta oo uu heshiiskiisu haatan ku egyahay xagaaga 2022. (Football London)
Manchester United ayaa wadahadalo la furtay AC Milan si ay ugala hadasho kooxda reer Talyaani inay amaah kula wareegto 22 jirka daafaca reer Portugal Diogo Dalot. (Metro)
Liverpool ayaa diyaarin doonta dalab £ 15m ah oo ay ku doonayso inay kula soo saxiixato goolhayaha reer Turkey ee Ugurcan Cakir oo ka socda kooxda Trabzonspor, iyadoo RB Leipzig iyo Sevilla ay sidoo kale xiiseynayaan 24 jirkaan. (Express)
Daaficii hore ee Arsenal Bacary Sagna ayaa sheegay inuusan layaabi doonin hadii daafaca midig ee reer Spain Hector Bellerin oo 26 jir ah uu katago Gunners. (Goal)
Serb Aleksandar Kolarov, oo 35 sano jir ah, ayaa laga yaabaa inuu ka tago Inter Milan dhamaadka xilli ciyaareedkan, iyadoo Bologna ay ka mid tahay shanta koox ee xiiseyneysa saxiixa daaficii hore ee Manchester City. (Tuttosport)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Real Madrid iyo Jarmalka Toni Kroos, oo 31 jir ah, ayaa qarka u saaran inuu ka fariisto ciyaaraha caalamiga ah ka dib Koobka Qaramada Yurub ee xagaagan. (Marca)